Gastronomy - Akụkọ Njem | Akụkọ Njem (Peeji nke 2)
N’oge Nsọ dị nsọ, a na-agbanwe Spain. Enwere otutu uzo ichoputa obodo Europe a site na ...
Ifnyaahụ ka anyị wetara gị nri ụtọ si na mpaghara anọ Andalusia, taa anyị ga-agwa gị ndị sitere na anọ ndị fọdụrụ: Malaga, Granada, Almería na Jaén.
N’isiokwu nke taa, anyị wetaara gị isi na isi nke onye anyị hụrụ n’anya, Andalusia. Mara ebe a ụdị ụdị nri Huelva, Cádiz, Córdoba na Seville.
Croqueteros, ebee ga-eri nri kacha mma na Madrid?
Croquette bụ otu n'ime nri ụtọ ama ama na Spanish gastronomy. Mmalite ya bụ ọtụtụ narị afọ gara aga na ...
A na-ahụta gastronomy Peruvian dị ka otu n'ime ndị kachasị iche na ụwa n'ihi na ọ bụ nsonazụ ...
Na-eme njem na New York ka ọ bụ nrọ gị ma ị nọ n'ụzọ iji nweta ya? Akwa! New York bụ ihe kacha mma ...
Na China ụmụ ahụhụ na-atọ ụtọ maka okpo ọnụ
Na China, a na-eri ụmụ ahụhụ ma ha bụ ezigbo nri. Chọrọ ịma nke ụmụ ahụhụ na-esi nri ma nwee ike ịmalite iri ya na Europe?
Sago Gula Melaka, ihe eji megharịa ọnụ nke Malaysia
You maara ihe ụdị desserts ndị Malaysia na-ahụkarị? Sago bụ ihe kachasị mma mana enwere ọtụtụ swiiti iji kwadebe maka eji megharịa ọnụ na nri gị.
Na Easter Sunday, Holy Week na-akwụsị taa, nke pụtara ịlaghachi na-eme ihe mgbe ole na ole ...
Chọpụta ihe dị mkpa na ọdịbendị Philippines: omenala, asụsụ na ozi ndị ọzọ metụtara gastronomy, okpukpe na ọtụtụ ndị ọzọ.
Kedu ụdị efere ndị Philippines? Anyị na-achọpụta nri ọkacha mmasị gị na Philippines ka ị wee mara ihe ị ga-anwale na njem gị.
Top 10 Japan talọ oriri na ọ Resụ Japaneseụ na New York City
Chọpụta ụlọ nri nri Japan kacha mma nke 10 na New York. Sushi na nri ndị ọzọ a na-ahụkarị maka nri ndị Japan na-amasị gị, echefula ya.
Chọpụta ụdị nri ndị Kambodia na-akwadebe usoro nri na aro gastronomic nke ị ga-ahụ maka gastronomy nke Cambodia.
Anyị na-aga Copenhagen ileta Carlsberg Beer Factory, a eduzi njem maara ya mmepụta usoro, ya akụkọ ihe mere eme na, n'ikpeazụ, akatabi okop ekpomeekpo
Koreandị ahịhịa ndị Korea na-eghe eghe
Oporo osikapa eghere eghe bụ nri North Korea nke anyị nwere ike ịme n'ụlọ anyị iji nye tebụl anyị aka n'akụkụ ụwa.
Ihe kpatara ị ga-efu na Andalusian Western Coast (I)
Iche n’anyị kwesiri inye gị ihe kpatara ị ga-eji tufuo na mpaghara ọdịda anyanwụ Andalusia (I)? Ndị a bụ ole na ole, na echi karịa na mma.
Mafe, kpochapụwo na nri West Africa
Mafe bụ nri ama ama na Gambia na n'ọtụtụ mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka, ọ bụ nkwadebe sitere na ọkụkọ na ahụekere.
Alfajores nke Cuba nke dulce de leche, maka ndị nwere eze dị ụtọ
Cuban alfajores bụ ihe ọzọ na-atọ ụtọ gastronomic na nri dị ụtọ nke mba Caribbean a nwere ike iwetara anyị.
Nke a bụ etu esi eme osikapa Cuban nke ọma
Ọzọ n’ime nri pụrụ iche nke Castro gastronomy, ikekwe n’ihi ịdị mfe ya, bụ osikapa Cuban, nke dịtụ iche na nke a na-eme na Spain.
Cherna ofe, ụzọ dị ụtọ ịmalite nri
Azụ na-arụ ọrụ dị oke mkpa na gastronomy Cuban na otu n’ime ọtụtụ nkwadebe ya bụ ofe cherna na-atọ ụtọ.
North Korea nwere ọtụtụ atụmatụ gastronomic nke nwere ike iju anya n'ezie.
Frankfurt na-eju onye ọ bụla anya n’ihi na ọ nwere ụzọ ndị ọzọ na-adịghị agwụ agwụ ị ga-eri, n’agbanyeghi ihe masịrị gị na akpa gị.
Café Vampire na Ginza, Tokyo
Na Ginza agbata obi na Tokyo, enwere ezigbo ebe dị egwu ma dịkwa egwu, ọbụlagodi obodo oke na ihe ịtụnanya dịka isi obodo Japan. Anyị na-ekwu maka Vampire Café, ụlọ oriri na ọ gụothụ gothic nke ejiri obe, okpokoro isi, cobwebs, chandeliers nwee nke nwere igbe ozu Count Dracula.
Echiche, ụlọ oriri na ọ revolụ revolụ na-agbanwe agbanwe
Na Marriott Marquis Hotel, na Times Square, ị ga-ahụ The View, naanị ụlọ oriri na ọ revolụ revolụ na-agbanwe agbanwe na New York
Petra, obodo nke nkume (IIIa)
Anyị rutere na nke atọ nke nleta anyị na Petra ebe anyị ga-amata gastronomy ọ bụghị naanị nke a ...
Kitchen nke thewa: Algeria (I)
Anyị nwere ike ịmata obodo ma ọ bụ obodo na otu puku na otu ụzọ dị iche iche na n'ụzọ doro anya, ụzọ kachasị mma bụ site na ịga ...
Vanuatu, obodo obi uto (III)
Anyị na-amalite akụkụ nke atọ nke ụzọ anyị na ebe a magburu onwe ya na oge a anyị ga-amata ụfọdụ n'ime ...
Nri a na-ahụkarị nke Albania
Maka ndị na-amaghị Albania bụ otu mba nọ na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Europe. Ọ dị nso na Montenegro n'ebe ugwu, Republic ...
Ihe ị ga-eri na Puerto Rico?
Ezigbo gastronomy nke Puerto Rico, nri Creole, dabere na ihe abụọ dị oke mkpa bụ banana ...
Restaurantslọ nri 5 kacha elu na Singapore
1.- Ọgba na Fort: Nke a bụ ezigbo ụlọ oriri na ọ romanticụ romanticụ na oge ọchịchị. Ga-ahụ n'anya ịmara ...
Acapulco abụrụla ebe ama ama ama ama na-eme njem nleta na ezumike kamgbe afọ ndị XNUMX, ya mere site na ...
Monaco, mba ndị okomoko
Mgbe Vatican gachara, Monaco bụ mba nke abụọ pere mpe n'ụwa, ma na-enweghị nnupụisi mbụ nke mbụ n'ọnụ ọgụgụ mmadụ….
Las Vegas, "obodo nke mmehie" (III)
Anyị na-abata akụkụ dị mkpa nke njem anyị na njem ọ bụla, nri mpaghara. Mba ahụ dum amaghị ...
Anyị banyere n'ụzọ zuru ezu na m ga-ekewa n'ime ụzọ abụọ ebe nri ndị Japan dị ...
Saigon for Beginners 1: Gopụ ihe ọ drinksụ drinksụ.
Saigon nwere aha ọma oge niile maka ndụ abalị. Ọbụna ndị Kọmunist mgbe ha tụgharịrị ya na Ho ...
Nke kacha mma nke Santorini na ụbọchị 4
Thira, bụ isi obodo, bụ ma eleghị anya obodo kachasị mma ma dị iche na Aegean. Ewubere ma leghaara ...
Nri abalị kaiseki na Gion, mpaghara gheisha nke Kyoto
Otu n'ime ahụmịhe mara mma nke njem a bụ nri abalị kaiseki na Gion, agbata obi…